आफ्नो श्री’मानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतीले यु’वतीको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी द’लिदिइन् ! – Life Nepali
आफ्नो श्री’मानसँग प्रेम गरेको भन्दै श्रीमतीले यु’वतीको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी द’लिदिइन् !
आफ्ना श्री’मानसँग प्रे¥म गरेको भन्दै एक महिलाले ती युवतीमको यौ¥नाङ्गमा खु’र्सानीक द’लिदिएकी छन्। यो ख’बर भारतको अहमदाबादको हो। आफ्ना श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै ती महिलाले थप २ म’हिलाको सहयोग लिएर २२ वर्षीया यु’वतीको यौ¥ना’ङ्गमा खुर्सानीको पा’उडर द’लेको भारतीय स’ञ्चारमा’ध्यमले उल्लेख गरेका छन्। खबर अ’नुसार ती यु’वती उ¥जुरी लिएर प्र’हरीकहाँ पुगेकी छन्।
ती यु’वतीले आफू अ’हमदाबादको ना’रानपुरा क्षे’त्रमा रहेको एउटा क’पडा प’सलमा काम गर्ने गरेको र गि’रीश गो’स्वामी नामक व्य’क्तिसँग प्रेम स’म्बन्ध अ’गाडि बढेको ब’ताएकी छन्। ती यु’वती र पुरु’षबीच २ व’र्षदेखि प्रे’म स’म्बन्ध र’हेकोमा पुरु’षले स’म्बन्ध अ’न्त्य गरि’दिए। यु¥वतीले बताए अनुसार गि’रीश गो’स्वामीले दुई महिना अघि उ’नलाई भे’ट्न बो’लाएका थिए।
तर, यो खबर ती पुरुषकी प’त्नीले समेत था’हा पाइन्। र, आफ्ना श्री’मानकी प्रेमि’कामाथि रिस पो’ख्न सा’थीहरुसँग मिलेर अ’पहरण समेत गरिन्। एक सु’नसान को’ठामा ल’गेर आफ्ना सबै लु’गा खो’लेको र यौ¥नाङ्ग’मा खु¥र्सानीको पा¥डर भरेको ती यु’वतीले प्रहरी स’मक्ष ब’ताएकी छन्। अ’हमदाबाद’का प्रहरी नि’रीक्षक जेए रा’ठवाका अ’नुसार यु’वतीको उ¥जुरीमाथि छा’नबिन भइ’रहेको छ। र, ती पु’रुषकी श्रीमतिसहित ३ म’हिलालाई नि’यन्त्रणमा लिइएको छ। –एजेन्सी
Previous कोरोना भाइरसबाट बच्न गाईको पि’साब र गोबर उपयोगी : यसरी प्रयोग गर्नुहोस् विधिसहित !
Next अध्ययन भन्छ : डाक्टर,नर्स र सुरक्षाकर्मीलाई सबैभन्दा धेरै निद्राको समस्या हुन्छन्”